Safiir Ka Mid Ah Safiirada Somaliland Ee Aduunka Oo Maanta Ka Dhex Hillaacay Shir Noociise Aan Hore Looga Baran In JSL Magaceedu Gaadho | Gaaroodinet
Safiir Ka Mid Ah Safiirada Somaliland Ee Aduunka Oo Maanta Ka Dhex Hillaacay Shir Noociise Aan Hore Looga Baran In JSL Magaceedu Gaadho
London(GRN):-Guud ahaan safiirada ama wakiilada Somaliland u fadhiya dalalka dibada ayey bulshadu ka dheregsan tahay inay yihiin saraakiil fadhiga mushahar iskaga qaata,inta badana aan haba yaraatee wax hawl ah u qaban qaranka ay metelaan marka laga tago xilliga ay wufuuda Somaliland soo booqdaan dalalka ay joogaan,balse wakhtigooda kale ku mashquulsan hawlahooda gaarka ah.
Hadaba waxa jirta tiro yar oo aad u kooban oo aynu odhan karno way guteen xilkii loo igmaday ama waabey ka sii kordhiyeen intii looga fadhiyey.
Waxaa maanta oo taariikhda tahay 12.09.2017 lagu qabtay shir balaadhan Magaalada Bonn ee Dalka Germany shirkan ayaa ahaa mid loogu Magac daray Start Up Africa .
Waxa shirkan ka soo qayb galay Madaxwaynaha Senegal ,wasiiro iyo weliba inta badan safiirada aduunka ee fadhigoodu yahay dalkaasi Germany gaar ahaan kuwa ka socda qaarada Africa, sidoo kale waxaa shirka ku sugnaa Xoghayaha gaarka ah ee Haweenayda ka arimisa dalkaasi Germany Angelo Markel iyo
Wasirka Qaxoontiga iyo Familien ka ee Niedasachen..
Shirkan oo lagu lafo guray arimo badan oo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, nabad-gelyada iyo kobcinta shirkadaha yaryar ee africa ayaa guul ku soo dhamaaday.
Shirkani ayaa ahaa mid si gaar ah loogu soo Martiqaaday Safiirka Somaliland ee Germany Amb. C/Fataax Cismaan Cigaal.
Safiirka ayaa hadal uu ka jeediyay shirka kaga hadlay Xaalada Somaliland ee waqtigan iyo doorashada dhawaan dalka ka qabsoomaysa, waxaanu ugu baaqay cid kasta oo danaynaysa Doorashada Somaliland inay ka soo qayb galaan laguna soo dhawayn doono gacmo furan.
Waxa xusid mudan in madaxweynaha dalka Senegal oo fadhiga uga kacay safiirka Somaliland markuu khudbadiisa dhameystay isagoo si diiran u gacan qaaday isla markaana ku hambalyeeyay dedaalka Somaliland ugu jirto dimuqraadiyada.
Hadalka Safiirka Somaliland madasha ka jeediyey ayaa ahaa mid madaxdii shirka ka soo qeyb gashay ku abuuray dareen gaar ah.
Sidoo kale waxa uu intii uu shirku socday safiirku kulamo gaargaar ah la qaatay Xoghayaha gaarka ah ee Bundes Kanzlerin Angela Merkel Mr, “Günter Nooke” isla markaana ah Persönlicher Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin
und Afrikabeauftragter des BMZ, (Lataliyaha Angela Merkel ee arimaha Affrica Isla markaana ah Guddoomiyaha Afrika ee Wasaaradda Federaalka ee Iskaashiga Dhaqaalaha).
Mr. Nooke ayaa safiirka ugu balan qaaday in dalkiisu Somaliland u soo diri doono koox goob joogayaal ah oo ka socda guddida doorashada dalka Germany oo ka qeyb qaadan doona hanaanka doorashada bisha November ka dhici doonta jamhuuriyada Somaliland.
Dhanka kale wasiiru dawlaha dhaqaalaha iyo maal gashiga dalka Nigeria Mr, David Ebowjua ayaa safiirka Somaliland ku marti qaaday shir ka dhici doona dalka Nigeria dabayaaqada bishan aynu ku jirno.
Dhanka kale safiirka Somaliland ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxii qabanqaabinta shirkan isla markaana ah Gudoomiyaha Friedrich Naumman, labada masuul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa Xidhiidhka labada Dal.
Wuxuu sidoo kale safiirku la yeeshay kulamo gooni-gooni ah inta badan safiiradii madasha ka soo qeyb galay.
Guud ahaan waxa la odhan karaa waa arin loo baahan yahay safiirada dhigiisa ahi inay kaga daydaan dedaalka iyo kartida safiirka Somaliland ee Germany Amb.Cabdifataax Cismaan Cigaal uu ugu jiro sidii Somaliland uu indhaha beesha caalamka ugu soo jeedin lahaa dalka Somaliland.